Arakaraky ny fikitihina azy
Rehefa mahafantatra ny vatany ny vehivavy dia afaka maminavina ny zavatra tiany ary isan’izany ny fikitihina ny kitso. Miankina amin’ny fomba hikitihina azy rahateo ny halalin’ny fahafinaretana azo. Aborao amin’ny olon-tiana ny fihetsika tokony ataony mba hanaitaitra io kitso io.
Mampiasa menaka sy lela ary molotra
Maro ny vehivavy mankafy ny fikitihana ny kitsony. Mba hahatakarana tsara ilay lanitra fahafito anefa dia tokony atao malefaka sy moramora izany kanefa tsy mifantoka loatra amin’iny ny lehilahy. Mampiasà menaka, ny lela sy ny molotra.
“Missionaire” sy “levrette”
Ny “missionnaire” no paozy manome vahana ny fikitihina ny kitso, eo am-panaovana firaisana. Azo asiana ondana kely ihany koa ao ambanin’ny lamosina, mba hahalalina kokoa ny fidiran’ny filahiana sy hikasohan’ny tampon’ny lehilahy eo amin’ny kitso. Raha tsy izany dia ny “levrette” indray, satria avy ao aoriana ny lehilahy, dia afaka manararaotra mikitika ny kitso amin’ny tanany.